Ngemva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngizwa sengathi ngobuningi ayiphimbo likaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Kodwa kubonakala sengathi amanye amazwi afana namazwi omuntu. Kungenzeka kanjani lokhu? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
80. Ngemva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngizwa sengathi ngobuningi ayiphimbo likaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Kodwa kubonakala sengat…
UNkulunkulu akathobeli mithetho, futhi uyakwazi ukukhuluma ngezindlela ezehlukene ukuze ukuhlakanipha nokuba namandla onke Kwakhe kucace. Akunandaba noma ukhuluma njengoMoya, noma njengomuntu, noma njengomuntu wesithathu—uNkulunkulu uhlale enguNkulunkulu, awunakusho ukuthi akayena uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukhuluma esesimweni somuntu. Phakathi kwabanye abantu kuqubuke imicabango ngenxa yezindlela ezehlukene uNkulunkulu akhuluma ngazo. Abantu abanjalo abanalwazi ngoNkulunkulu, futhi abawazi umsebenzi Wakhe. Ukube uNkulunkulu ubehlala ekhuluma ngendlela eyodwa, ngabe abantu abazange babeke imithetho ngoNkulunkulu? UNkulunkulu ubengamvumela umuntu ukuthi enze ngale ndlela? Noma ngabe iyiphi indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo, uNkulunkulu unenhloso ngendlela ngayinye. Uma uNkulunkulu ubezohlala ekhuluma ngendlela kaMoya, ubuzokwazi ukukhuluma Naye? Kanjalo, ukhuluma njengomuntu wesithathu ukukunikeza amazwi Akhe akuholele eqinisweni. Konke okwenziwa nguNkulunkulu kufanele. Kafushane, konke kwenziwa nguNkulunkulu, akumele ukungabaze nakancane lokho. Inqobo nje uma enguNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi ukhuluma ngayiphi indlela, usenguNkulunkulu. Leli iqiniso elingephikiswe. Noma ngabe usebenza kanjani, usenguNkulunkulu, futhi ingqikithi Yakhe ayisoze iguquke!
uNkulunkulu usebenzisa izindlela eziningi nemibono. Isibonelo, ngezinye izikhathi usebenzisa ihaba, ngezinye izikhathi usebenzisa indlela eqondile nemfundiso; ngezinye izikhathi usebenzisa izibonelo, futhi ngezinye izikhathi usola ngokhahlo. Kukho konke, kukhona zonke izinhlobo ezihlukene zezindlela, futhi inhloso ukuzwisa abantu izinhlobo ezingafani nokubanambithisa. Umbono akhuluma ekuwo uyashintsha ngezindlela ezingafani noma ngengqikithi yalokho akushoyo. Isibonelo, ngezinye izikhathi uthi, “Mina” noma “Yimi,” okusho ukuthi, ukhuluma nabantu esembonweni kaNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Ngezinye izikhathi ukhuluma engumuntu wesithathu, athi “uNkulunkulu” uyilokhu noma uyilokhuya, futhi kunezinye izikhathi lapho ekhuluma khona eyisidalwa esingumuntu. Akunandaba ukuthi ukhuluma ekumuphi umbono, akunakushintsha isiqu Sakhe. Lokhu kungenxa yokuthi akunandaba ukuthi ukhuluma kanjani, konke akuvezayo kungamazwi esiqu sikaNkulunkulu uqobo—konke kuyiqiniso, kuyilokho isintu esikudingayo.
Abanye abantu bazisa ukuthi ngikhonza lokho engibhekane nakho, kodwa ababoni ukuthi lokho kuyisibonakaliso sikaMoya ngokuqondile. Nakanjani, engikushoyo yilokho engibhekane nakho. Yimi engenze umsebenzi wokuphatha eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha ezedlule. Ngibhekane nakho konke kusukela ekuqaleni kokudalwa kwabantu kuze kube manje; ngingakakwazi kanjani ukukhuluma ngakho pho? Uma kuziwa esimweni semvelo somuntu, ngikubone ngokucacile, futhi sesiside isikhathi ngikubhekile; ngihlala kanjani ngingakwazi ukukhuluma ngayo ngokucacile? Selokhu ngaqala ukubona ubunjalo bomuntu ngokucacile, ngifanelekile ukusola umuntu futhi ngimahlulele, ngoba bonke abantu bavela Kimi kodwa bakhohlakaliswe uSathane. Nakanjani, ngifanelekile nawukuhlola umsebenzi engiwenzile. Yize lo msebenzi ungenziwanga inyama Yami, uveza uMoya ngokuqondile, futhi yilokhu engikwenzile nengiyikho. Ngakho, ngifanelekile ukukuveza futhi ngenze umsebenzi okumele ngiwenze. … Amazwi akhulunywe uNkulunkulu esesimweni somuntu enyameni akuveza ngokuqondile ngoMoya futhi aveza umsebenzi owenziwe nguMoya. Inyama ayikabhekani futhi ayikakuboni, kodwa kusaveza ubuyena ngoba inyama iphila ngoMoya, futhi uveza umsebenzi kaMoya.
Okwedlule：Emsebenzini kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, kungani esho amazwi amaningi kangaka okwahlulelwa kanye nokusolwa?
Okulandelayo：Sonke sizithola siphila emjikelezweni wokona nokuvuma isono singenayo indlela yokuphuma; ingabe amazwi kaNkulunkulu uSomandla angaguqula futhi ahlanze isintu?